Aviary for namakati: ukuhamba belondekile emgwaqweni futhi ithuluzi eliwusizo kule efulethini
ERussia, isimo sengqondo ukuze amakati ekhethekile. abalimi Iningi ezifuywayo nezilwane, okungaba konke, kodwa emizini yabantu tailed ngokuvamile ukuhamba bebodwa futhi lungase lungaveli amasonto ekhaya. Okuhluke kakhulu kunjalo e-United States. Kuleli zwe, ebiyelwe ongaphandle namakati - okuyinto evamile. Zama ukuthola ukuthi siyazuza lokhu nakho American nalokho kungaba wusizo ikati yezinyoni esikhulu?
Kungani Street ikati ebiyelwe?
I okufana ethandwa kakhulu lwezezindlu emadolobheni Russian - Indlu e elingaphansi kwesakhiwo sokuhlala. Kungenxa yalesi sizathu ukuthi abantu abaningi ezweni lethu bakhetha babe njengoba izindlu zakho zasehlobo yangasese ukuze bathole ukuphumula. Ngesikhathi cottage kwamukeleka ukuchitha impelasonto yonke, futhi imikhaya eminingi wathutha lapha wakwenza konke ehlobo. Kuthiwani ezifuywayo?
Abanikazi Iningi amakati, ophilayo unaphakade efulethini, ukhathazeke nezilwane abazifuyile. Okokuqala kokuba bemvelo, izilwane ezifuywayo bangase ukubaleka futhi babe elahlekile, ukulwa ne omakhelwane nezilwane noma izilwane zasendle, futhi nazo nezinye izinkinga eziningi. Sindisa ikati aviary - yezinyoni esikhulu lapho ungakwazi ukuhamba endaweni evulekile ngaphandle kwezinkinga. Lokhu kukhetha efanelekayo ukuze igcinwe unomphela izilwane ezindaweni eningizimu yezwe lethu. ezivalekile Iwusizo ongaphandle kanye zasendlini zingezokunikeza kuyo, imitholampilo wezilwane kanye zokukhosela.
Izimfihlo kukhethwa yezinyoni cat
Aviary for namakati - kusenzima exotic yangempela ezweni lethu. Ngokuvamile ku ezinkanjini enkulu ongaphandle ubambe izinja, noma izilwane zasemapulazini. Ngakho-ke, ezinye izimiso ezifanayo kumele ukhethe / ukuklama yezinyoni ikati? Zingaki izilwane ngeke kokubili abe ebiyelwe - zama hhayi ukuthi usephutheni ubukhulu amaseli.
Uma ebiyelwe ungaphakathi emgwaqweni, ophahleni yinzuzo kuye ukwenza kucace nengxenye kuphela. Akusiyo imfihlo ukuthi abangane bethu Tailed abathanda yokuthamela ilanga, kodwa isilwane kumele bakwazi futhi ufihle ku ithunzi.
Ukwakha yezinyoni ngokwakho: amathiphu
Eqinisweni, i aviary ngoba ikati ngezandla zakhe kungenziwa ngokushesha okukhulu, usebenzisa izinto ezekhethelo. Empeleni, wena kuphela kudingeka ucingo futhi inetha ingxenye abanye engadini yakho futhi wenze ophahleni. Nokho, ngesikhathi kwakhiwa kubalulekile ukucabangela lezimo eziningana ezibalulekile. Lungiselela ngengqondo yokuthi okungenani okokuqala, ngisho lamahle kakhulu futhi elula ebiyelwe amakati ngeke bafune. Uma esikhundleni yezinyoni phansi efakwe utshani yakho, anezikhala uthango kufanele embiwe phansi okungenani 10 amasentimitha. Ukwakha endaweni ebiyelwe ngokuba amakati kuleli zwe ngezandla zabo, ucosha izinto kahle. Ngokwesibonelo, igridi kufanele kube encane ukuze isilwane unamathele isidladla sakhe kuwo futhi babhajwe. Uma isikhala sivuma, Hlela ukuvala egumeni ukuze alethe kanye ukwenza izilwane ngaphandle ingozi ezokwenza abaleke.
Ikhaya enkundleni noma yezinyoni zasendlini amakati
Esikhathini nemibandela efulethini liphinde ngezinye izikhathi kudingekile ukwaba darling Tailed indawo siqu. Arenas Esisemqoka futhi ezinkanjini zasendlini amazinyane. Kufanele ukhethe isimiso silula: I abasha akumele ikwazi ukuphuma.
Kubalulekile futhi ukuthi umama Tailed kwadingeka ukufinyelela khulula enzalweni yabo, futhi umnikazi wayewabona konke okwenzekayo ngaphakathi. Ebiyelwe zasendlini amakati kuyoba usizo, futhi kwezinye izimo ezikhethekile, isibonelo, uma isilwane muva nje uye wenziwa ukuhlinzwa futhi kwaphela isikhathi esithile ukuba asuke ukwelashwa. Esisemqoka into enjalo futhi enza ihaba, uma efulethini okwesikhashana ophilayo izilwane eziningana okuqondene nomunye nobunzima. Qaphela: I-kittens ingasetshenziswa playpens ngaphandle ophahleni, kodwa abantu abadala kudingeka amaseli zivalekile.
Inja ukudla "Proplan": Ukwakheka, izibuyekezo abanikazi bezilwane kanye bezilwane
Evil cat Siamese - uyinganekwane yini noma iqiniso?
Echinodorus iVesuvius - aquarium nomhlobiso
Indlela ukukhetha igama ikati?
"Mormiks Pestorin": yokusetshenziswa, ngempela
Ngingaba thatha "ACC" phakathi nenkathi yokukhulelwa? izincomo odokotela '
Itshe Quarry - i yokwakha esisemqoka
Isifo Cushing sika - isifo nge pituitary hyperfunction
"Maxicold": yokusetshenziswa. "Maxicold" (spray): Yokusetshenziswa izingane
Cishe "Eglonil": yokusetshenziswa for iziguli
Zangaphansi izinqubo okumelwe iza abesifazane
Tattoo geometry: ukubaluleka nobukhulu nokuma okuhlukahlukene
Gainer: umonakalo noma inzuzo?
I izici eziyinhloko kanye ngezigaba amanxeba